Isilayidi seMyTouch 3G, iinkcukacha zobugcisa | I-Androidsis
Inkangeleko entsha Iifowuni eziphathwayo ze-Android ayimi kwaye nangona sele sinayo kuthethwe ngaphambili Le modeli, ayizaziwa zonke iinkcukacha. bucala ngasekhohlo Isilayidi seMyTouch 3G Inesikrini esine-intshi ezi-3,5, esikhudlwana kuneMlingo weHtc. Inkqubo yakho ye-ARM kwi-600 mhz Isantya kunye neendaba ezilungileyo kakhulu kwabo bathenga esi siphelo kukuba iya kuba ne-512 MB ye-RAM kunye ne-512 MB yeROM. Ikhamera yi-5 Mpx ene-LED. Unxibelelwano lubonelelwa yiWifi, ibluetooth kunye neGPS.
Android 2.1 Yinguqulelo yenkqubo yokusebenza eza ngokungagqibekanga kodwa inonxibelelwano olwahlukileyo kolo saziyo sivela kulo Android njengeyakho IHtc Sense i-Htc inyuka kwezinye iitheminali. Le yeyona nto ingakhange icaciswe mntu okoko IHtc Sense yintoni ekhwele i Htc umnqweno okanye iNtsomi yeHtc iyeza ngaphaya Android 2.1 kodwa ayifani enye efakwe kule terminal.
Ukuba sisiphelo esiza kuthengiswa yi-T-Mobile, iya kuza nezicelo ezilayishwe kwangaphambili ezinje nge swype. Amaxabiso okanye imihla ethile yokukhutshwa ayikaziwa, kodwa ukubona inani elikhulu ledatha kunye nemifanekiso ebonakalayo, le ntetho ayizukuthatha thuba lide.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Isilayidi seMyTouch 3G, iinkcukacha zobugcisa
Ami bandithumelele i-mytouch 3g slide ,,, ndabe ndibathumela ukusuka nge-28 kaJuni ndibathumela ukuba bayokukhangela umhla we-2 bandixelele ukuba ayinakuvulwa kuba kufuneka ibenekhowudi ,, emva koko bandixelela Ukubeka i-chip, kwenye inkampani kwaye iphinde yavalwa kwaye ke yandinika iingxaki ezininzi zokuyivula.Usiqinisekisa ngantoni ukuba ndiyayivula?
Phendula kumhla wokugqibela
Ndinesilayidi sam sokungqengqa 3
intle kakhulu super mega elungileyo
Ngomhla 3121 sitsho
Iscreen sonakalisiwe, ndifuna ukwazi ukuba ndingayidibanisa nawe, yile yam inombolo 8098628845
Phendula ku Darly3121
Molo NDIDINGA UKUFUNA INKOSI YAM, NDITENGISELE WAKHO
Ndifuna ukwazi ukuba uyisiphula njani? ngubani onokundixelela
Ukuphelisa ikhonkco sitsho
ubusuku obuhle ndifuna iteyiphu ye-El htc My touch 3g Slide unganditsalela umnxeba kule 3153330916 enkosi
Phendula kwikhonkco likaCesar
kuba andinakungena kwivenkile yokudlala kaGoogle ndiyabhalisa kwaye ayinakwenzeka
Molo, ndifuna ukwazi ukuba ingakanani imali endiyichukumisayo kwi-3g yeendleko zesilayidi